Jubaland oo soo gudbisay kuraasta dhawaan la dooranayo | KEYDMEDIA ENGLISH
Jubaland oo soo gudbisay kuraasta dhawaan la dooranayo
Maamul gobleedka Jubaland ayaa soo gudbiyey, in dhawaan la qaban doono doorashada 13 kursi, oo ka tirsan kuraasta aqalka hoose, ee laga sugayo maamulkaas.
KISMAAYO, Jubada Hoose- Guddiga doorashooyinka maamulka Jubaland ayaa shaaciyey, in la qaban doono, toddobaadyada soo socda doorashada 13 kursi oo ka mid ah kuraasta uu maamulkaas ku leeyahay gollaha shacabka.
Qaar ka mid ah kuraasta doorashadooda la qabanayo ayey sumadoodu tahay, HOP#127, HOP#130, HOP#133, HOP#136, HOP#219, waxaana maalmahan laga shaqeynayaa hannaankii fududeyn lahaa in ay doorashadooda qabsoonto.
Guddiga doorashada Jubaland, ayaa carabka ku dhuftay in ay de-dejin doonaan doorashada aqalka hoose, iyagoo xusay in dhankooda ay ka soo dhamaan doonto waxa ka horeeya 25-ka febraayo, oo ah jadwalka loo qorsheeyey in doorashada lagu soo dhameeyo.
Maamulka Jubaland ayaa hore u soo gudbiyey 14- kursi oo ka tirsan gollaha shacabka, kuwaa oo qaarkood la doortay.
Wixii ka danbeeyey heshiiskii gollaha wadatashiga, waxaa muuqanayo dadaalo ay maamulada dalka ugu jiraan, de-dejinta doorashada, walow aysan wax doorasho ah dhicin, haddana rajo weyn lagama qabo, in maamulada qaar ay qabtaan doorasho caddaalad ah, oo waqtigeeda ku soo idlaata.